Global Voices teny Malagasy » Fantaro i Mpumie Njobe, hampiantrano ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang ny 26 Jona hatramin’ny 2 Jolay · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Jona 2019 7:11 GMT 1	 · Mpanoratra Rising Voices Nandika avylavitra
Sokajy: Antsafa, Mediam-bahoaka, Teny afrikana sy Dizitaly-digiafricanlang
Photo provided by Mpumie Njobe.
Ny taona 2019, ho fandraisana anjara amin'ny fanentanana media sosialy hankalazana ny hamaroam-piteny ety anaty serasera , hifandimby hitantana ny kaonty Twitter @NativeLangsTech  ireo Afrikàna mpikatroka sy mpisolovava mpampiakateny ny fiteny afrikàna mba hizara ny zava-niainan'izy ireo amin'ny fanomezana aina vao sy ho fampiroboroboana ireo fiteny afrikàna. Ity lahatsoratra fampahafantarana ity dia hiresaka momba an'i Mpumie Njobe (@MpumieNjobe ) sy izay kasainy horesahana amintsika mandritra ny herinandro maha-mpampiatrano azy.
Rising Voices: Mba lazao anay ny mombamomba anao, azafady.
Rehefa avy niasa an-taona maro tany anaty orinasa, nitazona toerana isankarazany toy ny mpitantana ka hatramin'ny mpanatanteraka, nanapaka hevitra aho ny hirotsaka tamin'ny fampianarana. Azoko tamin'ny 2010 ny Maripahaizana ho Mpampianatra Teny Anglisy ny Olona Miteny Teny Hafa. Ny 2011 aho nanjohy ny tarika WLS amin'ny maha-IsiZulu mpanofana sy mpandrindra. Izaho no nitarika sy nandrindra ny ekipa izay nampianatra teny IsiZulu tao amin'ny Goldfields Mining tamin'ny fampiasàna fomba fampianarana teny misy fahaizamampita mba handrafetana fitaovana fanofanana ho an'ny teny IsiZulu, CD sy DVD ho an'ireo lesona IsiZulu
Izaho no nitarika ny ekipa nandrafitra ny rakibolan'ireo saripikaIsiZulu sy Sesotho. Tamin'ny 2013, nditra tao amin'ny Sampana Afrikana, Aziatika ary Eoropeana aho, izay nanohizako nampivoatra ny fitaovana fampianarana ny teny IsiZulu
Manana maripahaizana BA Honours Degree amin'ny resaka Fandikana lahatsoratra & Teny aho, nomen'ny Oniversite Wits, ary ankehitriny mianatra mba hahazo ny Maripahaizana Master amin'ny Fandikàna
Ny Janoary 2019, nametraka ny Learn EzeeZulu aho, orinasa iray manokantena amin'ny fanamoràna ny fitenenana IsiZulu any anaty tontolon'ny fandraharahàna.
RV: Manao ahoana ny toerana misy ny teninareo amin'izao fotoana izao, ao anaty sy ivelan'ny aterineto?
Voafetra be ny fahitàna ny teny IsiZulu any anaty sy ivelan'ny aterieto. Amin'izao ianareo dia mahita ao anati aterineto ireo tsy mpiteny IsiZulu mandefa votoaty ratsy kalitao. Ny azoko anambarana azy angamba dia hoe loharanonkarena ratsy kalitao no anananay ao anaty aterineto. Ety ivelany indray, manana loharanonkarena tsara izahay, saingy tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy.
RV: Mandritra ny herinandro itantananao ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang Twitter, lohahevitra mikasika inona no eritreretinao hifantohana?
Ireo ‘hainteny’ sy ‘fomba fiteny’ IsiZulu no tiako halefa.
Tiako hijanona ho velona ny isiZulu ary tiako koa haneho ny haren'ilay teny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/26/140929/
 amin'ny fanentanana media sosialy hankalazana ny hamaroam-piteny ety anaty serasera: https://rising.globalvoices.org/blog/2019/05/13/a-new-rotating-twitter-campaign-nativelangstech-will-amplify-the-voices-of-native-language-activists/